ရေငုပ်သမားနှင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာ – Healthy Life Journal
မေး. ရေငုပ်သမားတွေမှာ ဘာကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ရတာပါလဲ။
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ. ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ရေငုပ်တဲ့အခါ လေပိုက်ကို ပါးစပ်မှာတပ်ပြီး ငုပ်ရပါတယ်။ အပေါ်ကလေကို တွန်းချပေးတဲ့ နည်းနဲ့ အသက်ရှူရပြီး ရေထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဖိအားများလာပါတယ်။ လေထဲမှာ အကြမ်းအားဖြင့် အောက်ဆီဂျင် ၂၀ရာခိုင်နှုန်း၊ နိုက်ထရိုဂျင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်က ပြဿနာမပေးပေမယ့် နိုက်ထရိုဂျင်ဟာ ဖိအားများလာတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကတစ်သျှူး၊ အထူးသဖြင့် အဆီတစ်သျှူးတွေထဲကို ၀င်ပါတယ်။ ငုပ်တဲ့ရေနက်လေလေ၊ ရေထဲကြာကြာနေလေလေ၊ အဆီတစ်သျှူးထဲ နိုက်ထရိုဂျင် ပိုဝင်လေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေငုပ်တဲ့ သူက ရေပေါ်ကို ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာ ခပ်မြန်မြန်တက်ရင် ပျော်ဝင်နေတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်တွေက ပူဖောင်းအနေနဲ့ တစ်သျှူးတွေထဲကနေ ရုတ်တရက်ပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့တွေက ဦးနှောက်၊ အဆစ်အမျက်၊ ကြွက်သားနဲ့ တခြားအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ရောဂါဝေဒနာတွေ အများကြီးပေးနိုင်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Related Items:Divers, health, healthy